July 18, 2019 - CeleLove
July 18, 2019 Cele Love 0
မြိတ်မြို့တွင် ရွှေဝယ်သူဟန်ဆောင်ကာ ရွှေထည်လုယူမှုဖြစ်ပွား…. 18.7.2019…..ရွှေဝယ်သူဟန်ဆောင်ကာ ရွှေထည်လုယူမှု မြိတ်မြို့တွင်ဖြစ်ပွား….ရွှေဝယ်သူဟန်ဆောင်ကာ အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရွှေထည်လုယူမှုကို အခု CCTV မှတ်တမ်းမှာတွေ့မြင်ရမှာပါ နော် …။ မြိတ်မြို့ ဆိပ်ငယ်ဈေး မျက်နှာစာတန်းမှာရှိတဲ့ ကောင်းဆုရွှေဆိုင်ထဲကို ဇူလိုင်လ ၁၈ ညနေ ၃ နာရီခန့်က အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး […]
နည်းနည်းတော့ကြမ်းချင်ကြမ်းလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် ရေးရမှာပဲ နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့သာ နာကြပါ​တော့ခမျာ …….. “ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်အုပ်ထားရမယ့်နိုင်ငံ” နည်းနည်းတော့ကြမ်းချင်ကြမ်းလိမ့်မယ် …. ။ ဒါပေမယ့် ရေးရမှာပါပဲ …။ ၃တန်းအရွယ် ၄တန်းအရွယ်၁၀နှစ်ပတ်ချာလည်ယောက်ျားလေးတွေဟာSex movies ကြည့်တတ်နေပြီဆိုရင်သင်ယုံပါ့မလား …? အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်မှာအိမ်ကအကိုတွေ ဦးလေးတွေရဲ့ညစ်ညမ်း စာအုပ်တွေကိုကျောင်းကိုယူလာပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖတ်နေကြပြီဆိုသင်ယုံမလား …? ဒါတင်မကသေးပါဘူး …။ […]
ယောကျာ်းချင်း အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအား အလိုမတူပဲ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား….
ယောကျာ်းချင်း အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအား အလိုမတူပဲ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား…. ဇူလိုင် ၁၈ ရက်…..ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဥသျစ်ပင်ရဲစခန်းအပိုင်တလုပ်ပင်အုပ်စု ရေတွင်းလှကျေးရွာတွင် အသက်၂၆ နှစ်အရွယ်လူငယ်က အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအား အလိုမတူပဲယောကျာ်းချင်း အဓမ္မပြုကျင့်ရန်အားထုတ်သည်ဆိုကာ (၁၇.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ဥသျှစ်ပင်ရဲစခန်းသို့လာရောက်အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည် ….. ။ ဖြစ်စဉ်မှာ […]
ကျောင်းကားမတော်တဆမှုမှ ထိတ်လန့်ဖွယ် စီစီတီဗီ(ရုပ်သံ) အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကျောင်းကားတစ်စီးအား အခြားကားတစ်စီးမှ အရှိန်နဲ့ ဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့် ကျောင်းကား တိမ်းမှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ကားပေါ်တွင် ပါလာသော ကျောင်းသားကလေးတစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ ကားအတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ရုပ်သံကို ကားအတွင်းရှိ လုံခြုံရေးကင်မရာမှ ဖမ်းယူရရှိခဲ့သည် …. ။ ဇူလိုင်လ ၉ […]
တစ်လအတွင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း.. ပျိုမေအားလုံးရဲ့ အိပ်မက်က မှန်ကြည့်လိုက်တိုင်း အဆီကင်းစင်ပြီး လှပကျန်းမာတဲ့ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို မြင်နိုင်ဖို့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အဆီကျဖို့အတွက် ဝိတ်ချကိရိယာတွေ လိုအပ်တယ်လို့ သင်သိထားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အားကစားခန်းမသွားတာ၊ ဝိတ်တုံးမတာတွေထက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အစီအစဉ်ချပြီး ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အိပ်မက်ထဲက […]
ဇူလိုင်(၁၉) ရက်နေ့မှာ ချစ်သူနဲ့အတူ ရွှေလက်တွဲပြီး မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပတော့မယ့် အဆိုတော် ဇွဲပြည့် ဇွဲပြည့်ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသည်းကွဲသောနေ့ ဆိုတဲ့ ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီး ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဇွဲပြည့်ဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသည်းကွဲသောနေ့လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော် အခွေမှာတင် […]
အပျိုတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အကြောင်းရင်း (၅) ချက် ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တော်တော်များများမှာ အပျိုလေးတွေက ဗီလိန်ဖြစ်နေတာကို အားလုံးလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဘာကြောင့် အပျိုတစ်ယောက်က ရုပ်ရည်လည်းရှိရက်သားနဲ့၊ ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ သိက္ခာအကျခံပြီး တွဲနေရလဲဆိုတာ အားလုံးသိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် […]
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မတိုင်ခင်လေးမှာ ဆယ်ဖီဆွဲနေကြတဲ့ မိန်းကလေးများ
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မတိုင်ခင်လေးမှာ ဆယ်ဖီဆွဲနေကြတဲ့ မိန်းကလေးများ ကံကြမ္မာဟာ ကြိုတင်သိမြင်နိုင်စွမ်းမရှိသလို အရမ်းကိုမြန်ဆန်လွန်းလှပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်မိနစ်နေရင် ဖြစ်လာမယ့်အရာကိုလည်း ကြိုတင်သိမြင်နိုင်စွမ်း မရှိနိုင်ပါဘူး။ ၁၅၊ ၁၆ အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ယောက်နဲ့ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ မိန်းမပျိုလေး သုံးယောက်ဟာ ပေ ၃၀ မြင့်တဲ့ ရထားလမ်းတံတားတစ်ခုမှာ ဆယ်ဖီရိုက်နေရင်းနဲ့ […]
တဏှာစိတ်မပါဘဲ အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အပြုအမူများ …
တဏှာစိတ်မပါဘဲ အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အပြုအမူများ … အခုလို ခေတ်မျိုးမှာ အချစ်စစ် ဆိုတာ အရမ်း ရှားသွားပါပြီ ။ တဏှာကိစ္စတွေ မပါဘဲ မိန်းကလေးတယောက်အပေါ်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းတွေ ရှားသွားပြီလို့ ပြောရင်လည်း မလွန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မရှိဘူး လို့လည်း […]
ပြည်တက္ကသိုလ်ပထဝီဌာနက ကထိကတယောက်ဖြစ်နေပြီး ယုတ်မာချက်က လွန်ပါရောလား ဒေါ်အေးအေးညွန့်ဆိုတဲ့အဘွားကြီးဟာ ပြည်မြို့မှာနေပါတယ်။ အသက်(၆၆)ကျော်ကိုရောက်နေပြီး မုဆိုးမကြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမယ်အိုကြီးဟာအရင်က ပြည်တက္ကသိုလ်ပထဝီဌာနက ကထိကဒေါ်ခင်စန္ဒာမိုးရဲ့အိမ်မှာ ကပ်နေရပါတယ်။ အိမ်အလုပ်တွေဝိုင်းလုပ်ပေးရတဲ့ လခမရတဲ့ ဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစားသဘောပါ။ ဒေါ်ခင်စန္ဒာမိုးရဲ့အကိုဟာ ကျနော်တို့ပြည်မှာ ပဲခူးအနောက်ပိုင်းတိုင်းမှုးလုပ်ခဲ့ပြီး စစ်တပ်မှာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်အထိရောက်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းရဲ့ညီမအရင်းပါ။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းပါ။ အမယ်အိုကြီးဟာ ယိုးဒယားဘက်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူ့သမီးပို့လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ပိုက်ဆံ(၁၅)သိန်းကို […]